Rhapsody of Realities kore kore
Kana Mwari Vachitaura Zvichaitika ...
Mugovera, 25 Gunyana 2021
"Muvoni angataura hake. Achishandisa zita raMwari. Asi zvaanenge ataura zvacho zvingasaitika. Muvoni uyu anenge asina kutumwa naMwari kutaura mashoko aya. Anenge angobuda mumusoro make. Saka musiyei akadero" (Dheuteronomiyo 18 ndima 22 MSG).
Mwari vangataura zvinhu zvichaitika. Zvinhu izvi zvinototi zviitike. Hazvina basa kuti wazvigamuchira here kana kuti kwete. Ndizvo zvatinovona pana Simoni Pita. Jesu vakataura kwaari. Mashoko avo tinoaverenga muna Matiyo 26 ndima 34. Vakati, "Chirega ndikuudze chokwadi. Uchandiramba manheru ano. Uchandiramba katatu kose. Jongwe risati rarira". Pita haana kugamuchira mashoko aya. Tinoverenga davidzo yake muna Matiyo 26 ndima 35. Akati, "Kwete. Ndingatofa zvangu nemi. Asi hazvigoni kuti ndikutizeyi".
Asi mashoko aJesu aya akazoitika here? Hongu! Pita akaramba Jesu. Akati akanga asingavazivi. Pane paakatozotuka vakanga vari kumubvunza vacho. Achipika kuti akanga asingazivi Jesu. Tinovona izvi zvekare panhoroondo yaJudhasi. Jesu vakataura kuvadzidzi vavo. Vakavazivisa kuti mumwe wavo akanga achazovatengesa. Jesu vakanga vari kutaura pamusoro paJudhasi Isikarioti. Asi Judhasi uyu akazviramba. Akatogumbukira Jesu.
Mweya wakaipa wakabva wapinda maari. Ndizvo zvatinoziviswa neBhaibheri. Tinozviverenga muna Ruka 22 ndima 3. Judhasi akabva abuda. Akabva pakanga paina Jesu. Ndokuenda kuVapiri Vakuru. Ndokunoronga kutengesa Jesu. Magwaro azere nyaya dzakadai. Tinovona madzimambo achiziviswa zvakanga zvichazoitika. Tinovona nyika dzichiziviswa zvakanga zvichazoitika. Zvinhu izvi zvakazongoitika. Hazvina kumirira kuti vanhu ava vatange vazvigamuchira.
Asi zvakanaka kugamuchira mashoko aMweya akadai. Mashoko aya anozokuropafadza. Zvikuru sei kana mashoko aya ari ekukubatsira. Ndizvo zvatinovona pana Maria. Akataurirwa nezvekuzvarwa kwaJesu. Mhinduro yake tinoivona muna Ruka 1 ndima 38. Akati, "Ini ndiri mushandiri waShe. Zvamataura ngazviitwe hazvo".
Maria akagamuchira mashoko aya. Zvaakanga ataurirwa zvikazoitika. Akazozvara Ishe Jesu Kristu. Izvi ndizvo zvatinovona muna Ruka 1 ndima 35 kusvika 38. Ruka 1 ndima 45 inoti, "Wakaropafadzwa iwe mukadzi iwe. Nokuti wakagamuchira mashoko aShe. Nokuti mashoko aya achaitika". Saka Mweya Mutsvene vangataura mashoko kwauri. Mashoko aya angava ekukuropafadza. Unofanira kugamuchira mashoko aya. Ndiko kuti aitike muhupenyu hwako. Asi izvi zvinosiyana nekunge Mwari vataura zvichaitika kunyika yako. Kana zvichaitika munguva yako. Kana zvauchasangana nazvo mukururama kwako. Zvinhu izvi zvinongoitika chete. Kunyangwe ukasazvigamuchira. Unenge wakangofanira kudzidza Shoko raMwari. Worinzwisisa. Wonzwisisa zvaunofanira kuita nemashoko aMweya aya. Ndiko kuti ugokunda maari.
Ndava kuziva nzvimbo yangu muna Kristu. Saka ndava kutonga. Mwari vava kuvonekwa pandiri. Ndinogara ndichiwedzera simba. Mweya Mutsvene vachindisimudzira. Ndichikundisa neShoko raMwari. Ndiri kuparidza shoko reruponeso. Saka vakawanda vanowana ruponeso. Vanoporeswa. Vanoropafadzwa. Vanowana minana. Muzita raJesu. Ameni.
Isaya 55 ndima 11
1 Timoti 1 ndima 18
2 Makoronike 20 ndima 20
Rhapsody of Realities (Kore Kore)